ခြှေးပေါကျကယျြတာကို သကျသာသှားစမေယျ့ အလှယျကူဆုံး နညျးလမျးမြား
HomeKnowledgeခြှေးပေါကျကယျြတာကို သကျသာသှားစမေယျ့ အလှယျကူဆုံး နညျးလမျးမြား
အမြိုးသမီးသမီးတှကေ လှပဖို့အတှကျ မိတျကပျပစ်စညျးတှေ အမြားကွီး သုံးကွပါတယျ။ ညနရေောကျတဲ့အခါမှ မိတျကပျကို ဖကျြကွပါတယျ။ အဲဒီလို မိတျကပျလိမျးလိုကျ၊ ဖကျြလိုကျ၊ scrub လုပျလိုကျ၊ mask အုပျလိုကျ လုပျတဲ့အခါ ခြှေးပေါကျတှကေ ကယျြလာပါတယျ။ မကျြနှာပျေါက ခြှေးပေါကျကယျြတှကေို ကဉျြးသှားအောငျ လှယျလှယျကူကူ ပွုလုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှေ ရှိပါတယျ။
ခြှေးပေါကျတှကေ အဆီဂလငျးတှကေို ထုတျပေးပါတယျ။ အဆီဂလငျးတှကေ အသားအရကေို ရဓောတျဖွညျ့ဖို့၊ oxygen ပို့ပေးဖို့အတှကျ လိုအပျပါတယျ။ ပွီးတော့ အဆီတှကေ မိတျကပျပစ်စညျးတှရေဲ့ အကြိုးအာနိသငျတှေ ကိုလညျး စုပျယူပါတယျ။ ခြှေးပေါကျတှမှော ဖုနျတှေ၊ အညဈအကွေးတှေ ပွညျ့လာရငျ ဝကျခွံတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
ခြှေးပေါကျတှကေ ဘာ့ကွောငျ့ ကယျြရသလဲ ဆိုရငျ
1. အဆီထုတျလုပျမှု မြားလို့ပါ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ နရေောငျခွညျတှေ၊ အရညျအသှေး မကောငျးတဲ့ skincare ပစ်စညျးတှကွေောငျ့ ခြှေးပေါကျကယျြ ပါတယျ။
2. အသကျကွီးလာတဲ့ အခါ ကျောလဂငျြ ထုတျလုပျမှုက နှေးလာပွီး အရပွေားက ကြုံ့နိုငျဆနျ့နိုငျအား နညျးလာပါတယျ။ အဲဒီအခါ ခြှေးပေါကျကယျြ လာပါတယျ။ နရေောငျနဲ့ မြားမြား ထိတှတေဲ့အခါ ကျောလဂငျြတှေ ပကျြစီး ပါတယျ။
3. လလေ့ာခကျြတှေ အရ အာရှတိုကျက အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ခြှေးပေါကျက အမြားကွီးပွောငျးလဲမှု မရှိပါဘူး။ အိန်ဒိယနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ခြှေးပေါကျက ပိုကယျြ ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ခြှေးပေါကျကယျြတာ မြိုးရိုးဗီဇ နဲ့လညျး သကျဆိုငျ ပါတယျ။
- အစားအသောကျနဲ့ အသားအရကေို ထိနျးသိမျးပွီး အလှအပ ပစ်စညျးတှကေို သခြော ရှေးခယျြ သုံးစှဲသငျ့ပါတယျ။
- ကျောလဂငျြတှေ မပကျြစီးအောငျ လို့ နတေို့ငျး sunscreen ကို သုံးပေးသငျ့ ပါတယျ။
- မကျြနှာကို ပုံမှနျသဈတာ၊ ရဓောတျဖွညျ့တာတှေ ပွုလုပျပေးသငျ့ ပါတယျ။ မနကျခငျး မိတျကပျလိမျးပွီးတဈနာရီ အကွာမှာ အဆီပွနျလာတယျ ဆိုရငျ အသားအရမှော အဆီဂလငျးတှေ မြားနလေို့ပါ။
- အခြိုဓာတျမြားတဲ့ အစားအစာတှကေို လြှော့စားသငျ့ပါတယျ။
- သဘာဝအသီးအနှံတှနေဲ့ ပူပူစပျစပျ တှကေို ပိုစားပေးပါ။ သဈကွံပိုးခေါကျ၊ လေးညှငျးပှငျ့၊ ဂငျြး၊ ကွကျသှနျဖွူတှကေ အသားအရေ တှနျ့တာကို ကာကှယျပေးပါတယျ။
- လကျဖကျစီးရညျ သောကျပါ။ လကျဖကျစိမျးရညျက အဆီဂလငျး ထုတျလုပျမှုကို လြော့စပွေီး ဝကျခွံမပေါကျစတေော့ ပါဘူး။
- ငါးနဲ့ အသီးအရှကျတှကေို ပိုစားပါ။ အဲဒီအခါ ဝကျခွံပေါကျဖို့ အခှငျ့အရေး နညျးသှားပါတယျ။
မကျြနှာသနျ့စငျဖို့နဲ့ ရဓောတျဖွညျ့ဖို့ အတှကျ
ခြှေးပေါကျကယျြတဲ့ သူတှကေ ရဓောတျဖွညျ့ပေး သငျ့ပွီး တဈနကေို့နှဈခါ မကျြနှာသဈပေးသငျ့ပါတယျ။ မိတျကပျအကနျြတှေ၊ ဆဲလျသတှေေ၊ ဖုနျတှကေ ခြှေးပေါကျတှကေို ပိတျစပေါတယျ။ မကျြနှာ သဈပွီးတဲ့ အခါ မကျြနှာကို ရဓောတျဖွညျ့ cream လိမျးပေးသငျ့ပါတယျ။
- မကျြနှာကို အလှဆီ လိမျးပေးပါ။ အဲဒီအခါ ဆဲလျတှေ အားပွညျ့လာပွီး ခြှေးပေါကျတှေ လညျး သနျ့သှားမှာပါ။
- Scrubs သုံးတာက အသားအရကေို ပကျြစီးစပွေီး ခြှေးပေါကျတှကေို ပိုကယျြလာစေ ပါတယျ။
- မကျြနှာ ကွညျလငျဖို့အတှကျ ဂယျြ လျသုံးသငျ့ပါတယျ။ အဆီပွနျတတျတဲ့ အသားအရအေတှကျ lotion ထကျ gel က ပိုသငျ့တျော ပါတယျ။
- ပုံမှနျသုံးနတေဲ့ ဆပျပွာနဲ့ မကျြနှာ မသဈသငျ့ပါဘူး။ ဆပျပွာမှာ pH 8 ကနေ 10 အထိ ပါဝငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အပျေါယံ အသားအရကေို ပကျြစီးစပွေီး အဆီဂလငျး ထုတျလုပျမှုကို ပိုမြားစမှောပါ။ pH level 5.5 ထကျ မမြားတဲ့ ဆပျပွာကို သုံးလို့ ရပါတယျ။
- မကျြနှာကို နလေ့ယျ 12 နာရီနဲ့ ညနေ4နာရီကွားမှာ တဈခါသဈပေးပါ။ နလေ့ယျ အခြိနျမှာ အဆီထုတျလုပျမှု ပိုမြားပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ နလေ့ယျမှာ အဆီ ပိုပွနျတတျ တာပါ။
- Sunscreen က နရေောငျခွညျကို ကာကှယျပေးလို့ သုံးသငျ့ပါတယျ။ Suncscreen သုံးတဲ့အခါ ကျောလဂငျြ မပကျြစီးတော့လို့ အရေးအကွောငျးပျေါတာ သကျသာသှားမှာပါ။
- ရဓောတျ ပါဝငျတဲ့ creamတှေ၊ ဂယျြလျတှကေိုလညျး သုံးသငျ့ပါတယျ။ အဲဒီအခါ ခြှေးပေါကျမပိတျတော့ပါဘူး။
စိတျခရြတဲ့ မိတျကပျပစ်စညျးတှကေိုပဲ သုံးပါ။
မိတျကပျမှာ ပါဝငျတဲ့ ဖယောငျး၊ အဆီ၊ တှကေလညျး ခြှေးပေါကျ ပိတျစပေါတယျ။
1. ပေါငျဒါမှုနျ့တှကေ ခြှေးပေါကျကို ပိတျစပေါတယျ။ Mineral powder ကို အသုံးပွုသငျ့ ပါတယျ။
2. Alcoholက အသားအရကေို ခွောကျသှစေ့ပွေီး ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားရမှာ နှောငျ့ယှကျပါတယျ။
3. Mineral oil ပါဝငျတဲ့ အလှအပပစ်စညျးတှေ ပိုလညျး မြားမြား မသုံးသငျ့ပါဘူး။
ချွေးပေါက်ကျယ်တာကို သက်သာသွားစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းများ
အမျိုးသမီးသမီးတွေက လှပဖို့အတွက် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေ အများကြီး သုံးကြပါတယ်။ ညနေရောက်တဲ့အခါမှ မိတ်ကပ်ကို ဖျက်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို မိတ်ကပ်လိမ်းလိုက်၊ ဖျက်လိုက်၊ scrub လုပ်လိုက်၊ mask အုပ်လိုက် လုပ်တဲ့အခါ ချွေးပေါက်တွေက ကျယ်လာပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို ကျဉ်းသွားအောင် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
ချွေးပေါက်တွေက အဆီဂလင်းတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဆီဂလင်းတွေက အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့၊ oxygen ပို့ပေးဖို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဆီတွေက မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေ ကိုလည်း စုပ်ယူပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေမှာ ဖုန်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေ ပြည့်လာရင် ဝက်ခြံတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ချွေးပေါက်တွေက ဘာ့ကြောင့် ကျယ်ရသလဲ ဆိုရင်
1. အဆီထုတ်လုပ်မှု များလို့ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ နေရောင်ခြည်တွေ၊ အရည်အသွေး မကောင်းတဲ့ skincare ပစ္စည်းတွေကြောင့် ချွေးပေါက်ကျယ် ပါတယ်။
2. အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါ ကော်လဂျင် ထုတ်လုပ်မှုက နှေးလာပြီး အရေပြားက ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အား နည်းလာပါတယ်။ အဲဒီအခါ ချွေးပေါက်ကျယ် လာပါတယ်။ နေရောင်နဲ့ များများ ထိတွေ့တဲ့အခါ ကော်လဂျင်တွေ ပျက်စီး ပါတယ်။
3. လေ့လာချက်တွေ အရ အာရှတိုက်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ချွေးပေါက်က အများကြီးပြောင်းလဲမှု မရှိပါဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ချွေးပေါက်က ပိုကျယ် ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ချွေးပေါက်ကျယ်တာ မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့လည်း သက်ဆိုင် ပါတယ်။
- အစားအသောက်နဲ့ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းပြီး အလှအပ ပစ္စည်းတွေကို သေချာ ရွေးချယ် သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
- ကော်လဂျင်တွေ မပျက်စီးအောင် လို့ နေ့တိုင်း sunscreen ကို သုံးပေးသင့် ပါတယ်။
- မျက်နှာကို ပုံမှန်သစ်တာ၊ ရေဓာတ်ဖြည့်တာတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့် ပါတယ်။ မနက်ခင်း မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတစ်နာရီ အကြာမှာ အဆီပြန်လာတယ် ဆိုရင် အသားအရေမှာ အဆီဂလင်းတွေ များနေလို့ပါ။
- အချိုဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေကို လျှော့စားသင့်ပါတယ်။
- သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ ပူပူစပ်စပ် တွေကို ပိုစားပေးပါ။ သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ လေးညှင်းပွင့်၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူတွေက အသားအရေ တွန့်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
- လက်ဖက်စီးရည် သောက်ပါ။ လက်ဖက်စိမ်းရည်က အဆီဂလင်း ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့စေပြီး ဝက်ခြံမပေါက်စေတော့ ပါဘူး။
- ငါးနဲ့ အသီးအရွက်တွေကို ပိုစားပါ။ အဲဒီအခါ ဝက်ခြံပေါက်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းသွားပါတယ်။
မျက်နှာသန့်စင်ဖို့နဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ အတွက်
ချွေးပေါက်ကျယ်တဲ့ သူတွေက ရေဓာတ်ဖြည့်ပေး သင့်ပြီး တစ်နေ့ကိုနှစ်ခါ မျက်နှာသစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်အကျန်တွေ၊ ဆဲလ်သေတွေ၊ ဖုန်တွေက ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်စေပါတယ်။ မျက်နှာ သစ်ပြီးတဲ့ အခါ မျက်နှာကို ရေဓာတ်ဖြည့် cream လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။
- မျက်နှာကို အလှဆီ လိမ်းပေးပါ။ အဲဒီအခါ ဆဲလ်တွေ အားပြည့်လာပြီး ချွေးပေါက်တွေ လည်း သန့်သွားမှာပါ။
- Scrubs သုံးတာက အသားအရေကို ပျက်စီးစေပြီး ချွေးပေါက်တွေကို ပိုကျယ်လာစေ ပါတယ်။
- မျက်နှာ ကြည်လင်ဖို့အတွက် ဂျယ် လ်သုံးသင့်ပါတယ်။ အဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေအတွက် lotion ထက် gel က ပိုသင့်တော် ပါတယ်။
- ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ မျက်နှာ မသစ်သင့်ပါဘူး။ ဆပ်ပြာမှာ pH 8 ကနေ 10 အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အပေါ်ယံ အသားအရေကို ပျက်စီးစေပြီး အဆီဂလင်း ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုများစေမှာပါ။ pH level 5.5 ထက် မများတဲ့ ဆပ်ပြာကို သုံးလို့ ရပါတယ်။
- မျက်နှာကို နေ့လယ် 12 နာရီနဲ့ ညနေ4နာရီကြားမှာ တစ်ခါသစ်ပေးပါ။ နေ့လယ် အချိန်မှာ အဆီထုတ်လုပ်မှု ပိုများပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နေ့လယ်မှာ အဆီ ပိုပြန်တတ် တာပါ။
- Sunscreen က နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးလို့ သုံးသင့်ပါတယ်။ Suncscreen သုံးတဲ့အခါ ကော်လဂျင် မပျက်စီးတော့လို့ အရေးအကြောင်းပေါ်တာ သက်သာသွားမှာပါ။
- ရေဓာတ် ပါဝင်တဲ့ creamတွေ၊ ဂျယ်လ်တွေကိုလည်း သုံးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ချွေးပေါက်မပိတ်တော့ပါဘူး။
စိတ်ချရတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုပဲ သုံးပါ။
မိတ်ကပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဖယောင်း၊ အဆီ၊ တွေကလည်း ချွေးပေါက် ပိတ်စေပါတယ်။
1. ပေါင်ဒါမှုန့်တွေက ချွေးပေါက်ကို ပိတ်စေပါတယ်။ Mineral powder ကို အသုံးပြုသင့် ပါတယ်။
2. Alcoholက အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေပြီး ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားရမှာ နှောင့်ယှက်ပါတယ်။
3. Mineral oil ပါဝင်တဲ့ အလှအပပစ္စည်းတွေ ပိုလည်း များများ မသုံးသင့်ပါဘူး။